ပစ္စည်း Custom shoes cardboard carton shipping mailing corrugated box with handle
အရွယ်အစား According to customers' specific requirements. ကဲ့သို့: L* W * H in CM or inches.
Paper Type B-Flute, E-Flute, F-Flute, kraft စက္ကူ
Product Type မြှောင်းပုံ Box ကို
Product Usage Gift Box, Wine Box, Chocolate Box, Pen Box, Food Box, Tea Box, Cosmetic Box, Candy Box, စသည်တို့.
Printing Color 4ဂ (CMYK) & Spot color(pantone color, PMS#)
မျက်နှာပြင်ပြီးစီး Glossy/Matte Lamination, ခရမ်းလွန်, Hot Stamping, Embossed/Debossed
Accessories သံလိုက်, ဖဲကြိုး, EVA, plastic tray, sponge, flowers, PVC/PET/PP window, စသည်တို့.
Other Printed Items စက္ကူအိတ်, စက္ကူဘူး, မြှောင်းပုံ Box ကို, Children Book, Sticker
နမူနာအချိန် 3-5 Days
ငွေပေးချေမှု TT, L / C, MoneyGram, ဝက်စတန်ယူနီယမ်ငွေလွှဲ
Other We provide one stop service, ဒီဇိုင်း, production and packaging
အနုပညာလက်ရာဒီဇိုင်း→ရုပ်ရှင်ကားရိုက်ခြင်း→အမှာစာများပုံနှိပ်ခြင်း→ပုံနှိပ်ခြင်း→ Lamination → Die-ဖြတ်တောက်ခြင်း→ကော်(စက်သို့မဟုတ်လက်ဖြင့်ပြုလုပ်နိုင်သည်, အခြေအနေအရပဲ) → QC စစ်ဆေးခြင်း→ထုပ်ပိုးခြင်း→တင်ပို့ခြင်း
ငါတို့သည်သင်တို့၏လိုအပ်ချက်များနှင့်အတူထုံးစံ box ကိုလုပ်ပါ , သင်လိုအပ်လျှင်ဒီဇိုင်းပြုလုပ်ရန်အတွက် template ကိုကျွန်ုပ်တို့ပေးပို့နိုင်သည်.
ကျနော်တို့ကတောက်ပ / Matt lamination အဖြစ်မျက်နှာပြင်ပြီးအမျိုးမျိုးတို့ကိုလက်ခံသည်, hot stamping, ဖောင်းကြွ, ခရမ်းလွန်ရောင်ခြည်, စသည်တို့. ပေးထားသောအောက်ပါပုံများသည်သင့်ကြင်နာစွာရည်ညွှန်းရန်ဖြစ်သည်. တိကျသောလိုအပ်ချက်များအတွက်ကျွန်ုပ်တို့အားအသိပေးပါ, ငါတို့သည်သင်တို့၏အားလုံးတောင်းဆိုမှုများကိုဖြည့်ဆည်းပေးနိုင်သည်.
For new customers, we will charge the basic material cost for sampling. But for regular customer, sampling will be free of charge. We promise that for each sampling, lead time will be controlled in7အလုပ်လုပ်ရက်.
We have been working with some forwarders, who offer us preferential prices for more than5နှစ်ပေါင်း. With this advantage, surely we can save your budget.
က: ကျနော်တို့ထုတ်လုပ်ရေးဖြစ်ကြသည် 15 ပုံနှိပ်နှင့်ထုပ်ပိုးထုတ်ကုန်များတွင်အထူးပြု Year.
Q2: သင့်ရဲ့ကုန်ပစ္စည်း Range ကဘာလဲ?
က: 1. စက္ကူအိတ်; 2. စက္ကူဘူး; 3. CorrugatedBox; 4. Gift Box; 5. အခြားစက္ကူထုတ်ကုန်များ
က: 1. ထုတ်ကုန်များ၏အရွယ်အစား (အကျယ် x Gusset x အမြင့်)
ဖြစ်နိုင်လျှင်, စစ်ဆေးခြင်းအတွက်ဓာတ်ပုံများသို့မဟုတ်ဒီဇိုင်းပုံကြမ်းများကိုလည်းပေးပါ. နမူနာများကိုရှင်းလင်းရန်အကောင်းဆုံးဖြစ်လိမ့်မည်. မရရှိလျှင်, ကျနော်တို့ကိုးကားစရာအသေးစိတ်နှင့်အတူသက်ဆိုင်ရာထုတ်ကုန်အကြံပြုပါလိမ့်မယ်.
Q4: ကျနော်တို့အနုပညာလက်ရာများဖန်တီးတဲ့အခါ, ပုံနှိပ်ခြင်းအတွက်ဘယ်လိုအမျိုးအစားမျိုးရရှိနိုင်တယ်?
က:လူကြိုက်များသူများ: PDF, CDR, အာအိုင်, PSD.
Q5: နမူနာဘယ်လောက်ရက်ပေါင်းပြီးစီးလိမ့်မည်? အဘယ်သို့သောအစုလိုက်အပြုံလိုက်ထုတ်လုပ်မှုကော?
က:ယေဘူယျအားဖြင့်, 5-7 နမူနာအောင်ဘို့ရက်ပေါင်း.
အစုလိုက်အပြုံလိုက်ထုတ်လုပ်မှု၏ခဲအချိန်ပမာဏပေါ်မူတည်ပါလိမ့်မယ်, ထုတ်လုပ်မှုအနုပညာ, စသည်တို့. FYI, တစ်လလုပ်နိုင်ပါတယ် 100000 PC စျေးဝယ်အိတ်များ.
အမှတ်အသားများ (Tags)：မြှောင်းပုံ Box ကို, စိတ်ကြိုက်လက္ကားဖိနပ် box ကိုထုတ်လုပ်သူများနှင့်ပေးသွင်း
ပန်းရောင်စိတ်ကြိုက်ပုံနှိပ်လိုဂို3E Corrugated Flute Flute အဝတ်အထည်ပို့ဆောင်ရေးသေတ္တာနှင့်အတူမြှုပ်နှံထားသော box ကို
စိတ်ကြိုက်စကျင်ကျောက်ပုံစံပုံနှိပ်ဖက်ရှင် Hot Sale လက်ဆောင်အစုံအလှကုန်ထုပ်ပိုးသေတ္တာ
လိုဂိုအမှတ်တံဆိပ်ဘရောင်း Corrugated စက္ကူခေါက်ထုပ်ပိုးအထုပ်နှင့်အတူပုံနှိပ်
စိတ်ကြိုက်ဆွဲဆောင်မှုစျေးနှုန်း Hot Sale အိတ်ဆောင်မြှောင်းပုံအဝတ်အစား Mailer Box ကို